MAXUU BOLETUS U EGYAHAY: SHARAXAADDA NOOCYADA CAADIGA AH EE BOORSADA - MUSHROOMS
Xitaa mishiinka musqusha ee aan khafiifka ahayn waligiis iskuma dhex darin boqoshaada noocyada kale, maadaama ay magacoodu iska hadlaan: dhammaan noocyada noocyada noocaan ah waxay leeyihiin maqaarkiisa. Boqoshaada Boletus tiro ka badan 40 nooc oo kala duwan. Guud ahaan, fangaska tufaaxa ee reer Boletov waxaa loo yaqaan 'buzzers'.
Waxay inta badan ku koraan kalluunka qallafsan, isku dhafan iyo geed-geedeed, laakiin, intaa waxaa dheer, waxaa laga heli karaa meel kasta oo ka mid ah meeraha, taas oo lagu tilmaamayo cimilada dabiiciga ah, iyo xitaa Afrika iyo Australia.
Aynu eegno noocyada saliidda iyo sida ay u kala duwan yihiin.
Mushaharka boletus ee ugu yar waa carruurta. Badanaa, dadka wax lagu kariyo ee mushaharku ma fiiriyaan. Iyo si aan micne lahayn, maadaama uu yahay mid aad u dhadhan fiican leh oo gabi ahaanba ammaan ah. Ururinta boqoshaada waxaa la sameeyaa laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar. Waxay leeyihiin difaac adag oo daciif ah. Sida jiletus oo dhan, ariga waa noocyada nooca mycorrhiza-ku leh, waxay dareemeysaa inay ku fiican tahay geedaha qoyan ee carrada bacaadka ah. Mushrooms waxay ka muuqdaan kooxo badan kadib roobab culus.
Dabiiciga ah, riyuhu wuxuu u eg yahay mokhovik mushroom, laakiin wuxuu leeyahay daboolid badan, oo daboolay maqaarka dhuxusha leh ee kor ku xusan. Xiddiga iyo lakabka tubada ee fangasku waa midab casaan ah. Qashinka fangaska waa jaalaha, iyo meelo ka mid ah tartiib tartiib ah.
Ma taqaanaa? Kozlyak ayaa si fudud u adkaata gooryaanka. Sawir la yaqaan ayaa ah rooga ariga ah ee roodhiga, laakiin xaqiiqda ma jirto wax la qaadan karo. Xataa xitaa ka dib marka la jarayo musqusha waxaan arki karnaa nadiif nadiif ah, tani macnaheedu ma'aha in aysan dabooli doonin dixir. Ka dib markaad hubiso dhowr ka mid ah kumanaan boqoshaada digaag, waxaad si buuxda uga niyad jabin doontaa iyaga.
Laga soo bilaabo boqoshaada daacad ah oo la kariyey budada ah. Si arrintan loo sameeyo, boqoshaada la qalajiyey waa sahlan ee Booqday Furimaha Dagaalka. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro budada marka la karinayo suxuunta qiyaasaha ugu yar sida ay u leedahay dhadhanka iyo dhadhanka badan, tanoo ka badan boqoshaada cusub.
Maxay u egtahay nasiibku? Waxay leeyihiin fur furan oo cad ama bunni leh oo leh dhexroor ah 6 - 14 cm. Miisaanka dhalinyarada wuxuu leeyahay dabool yar, kaas oo, sida uu u bislaaday, wuxuu noqdaa mid isku dhafan, oo qaybta dhexena wuxuu noqdaa midab badan. On dhinaca gudaha, taargooyo gaaban oo jaale-cad ah ayaa la arki karaa, oo ah godadka dhirta ah ee la gashado. Fangasku wuxuu leeyahay mid yar, xarrago leh, midab-cad oo huruud ah, kaas oo noqda mid xajmi leh oo dhuuban xagga saldhigga. Seddexda subagga ayaa leh jidhka cad, dhadhanka jilicsan iyo carafka macaan.
Mushinka wuxuu ku noolyahay geedo geedo ah oo aan badneyn oo aan la mid aheyn oo ku saabsan halabuurka ciidda. Wuxuu koraa keli ahaan iyo kooxba. Waxaad arki kartaa saliida Bellini kaliya kaynta dayrta.
Saxanka subagga cad cad
Albaabka caddaanku wuxuu leeyahay ilaa 12 cm dhexdhexaad ah, marka la eego jiritaanka dhalinyaradu, daboolka ayaa ah mid furan, laakiin maaddaama fungus ay soo baxdo, waxay jajabisaa mararka qaarkoodna xitaa noqotaa casaan.
Ma taqaanaa? Boqollaal dhalinyaro ah ayaa leh fur furan oo huruud ah, oo madow ku leh da'da waxayna noqdaan naxwad ama huruud ah-caddaan, iyo cimilada qoyan xitaa waxay noqon kartaa mid cufan leh.
Boorsada cad cad waxay leedahay dabacsanaan, dabool yar oo fareem leh oo leh sheen yar. Diirka diirka ayaa si fudud loo kala soocayaa. Fangasku wuxuu leeyahay jinsi cadaan ah ama jaale ah, taas oo ah jardiinka oo noqda midab madow ah.
Lugta xayawaanka ah ama cylindrical, cad. Iyadoo da'da, waxay noqon kartaa mid lagu daboolo dhibco-caleemo-brown iyo tubercles, kuwaas oo isku-duubi kara oo sameeya wareegyo.
Xidhan subax madow
Dufanka jaalaha ah ee jaalaha ah wuxuu leeyahay dabool yar oo wareeg ah oo leh geeska la jeexay. Marka fangaska koraayo, daboolka jaalaha ah wuxuu yeelan doonaa qaab barkin-qaab eg oo wuxuu gaari karaa dhexroorka min 5 ilaa 14 cm. Faragelin tijaabooyinka dhallinyaradu waxay leeyihiin midabbo saynis ah ama midab leh. Markuu koro, daboolka dildilaaca iyo daboolaya miisaan yar, kaas oo si buuxda u baaba'aya bisaylka. Jidhka subaga-huruudka-huruudka ah ayaa ka sheegi kara heerka kudka oo ah fangaska: marka ugu horeysa waa midab-huruud ah, gaduud-casaan dambe, kadibna casaan-guduud, iyo qaan-gaadhnadu waxay noqotaa mid fudud iyo wax yar. Fangasku wuxuu leeyahay cufan, adag tahay inuu diiriyo.
Qeybta cylindrical ama qaabka naadiga ah ee boqoshaada jaalle-madow waxay gaartaa dhererka 3 illaa 9 cm Saliida waxay yeelan kartaa caraf udgoon oo macaan leh, laakiin sidoo kale waxay ufi uraysaa cirbadaha geedaha.
Ma taqaanaa? Inkasta oo muuqaalka muuqaalka iyo nabadgelyada buuxda, saliida jaalaha ah ee jaalaha ah dhif ayaa loo isticmaali karaa dadka wax lagu kariyo maaddaama aysan aheyn mid aad u dhadhan fiican leh, sidaas darteedna waxaa la cunaa oo keliya qaabka la kariyay.
Albaabka cad-cagaaran ayaa si fiican u kora carrada ciidda, waxaa laga heli karaa kaynta laga bilaabo Juun ilaa Nofembar. Fungus ayaa labadaba koraaya labadaba iyo kooxo yaryar.
Xidid saliida saliidda
Saliidda huruudka ahi, waxay sharaxaysaa taas oo ka duwan tii yarayd ee sharaxaadda dhammaan Boletovs kale, waxay jecel yihiin diirimaad, waxaana laga helaa kaymaha carrada ciidda leh. Fungus ayaa labadaba koraa labadaba iyo kooxo badan. Waa suurtagal in la qaado kareemo huruud ah ka dib roobab culus, laga bilaabo Maajo ilaa Nofeembar. Mushta waxay leedahay dabool leh dhexroor 3 ilaa 6 cm.
Waa muhiim! Inkasta oo dhadhankiisu sarreeyso, saxanka huruudda ah ee jaalaha ah waxaa loo tixgeliyaa xaalad ahaan la cuni karo, maadama uu maqaarku ka kooban yahay walxo sababa shuban daran.
Boqoshaada dhallinyaradu waxay leeyihiin khaanado muuqaal ah, oo, marka baaluqa, qolofta ay furto oo ay noqoto barkin-qaabeeya. Iyada oo ku xiran da'da, midabka furka fangasku wuxuu noqon karaa midab jaalle ah, midab jaalle ah, midab huruud ah, iyo xitaa shukulaatada. Dusha sare ee xuubka ayaa ah mid xuub leh, maqaarka si fudud ayaa looga saari karaa.
Saliidda jaalaha ah waxay leedahay lugta oo gaadhaysa 3 cm dhexroor oo leh jilbil saliid ah, oo kor ku xusan oo leh midab cad oo hoos ku qoran wuxuu leeyahay midab jaalle ah. In boqoshaada dhallinyarada ah, giraanta waa caddaan, laakiin da'da waxay ku qaadataa nal ubax ah. Tuubooyinka fungus waxay leeyihiin midab qurux badan, laakiin da'da waxay noqdaan kuwo ku dhawaad ​​buni ah.
Cuntada cad ee fangaska waxay noqon kartaa huruud. Meelaha ugu sareeya ee lugta iyo korka lugta, waa orange ama marble, saldhigana way yar tahay. Calaamadinta huruudka ah waa mid aad u dhadhan fiican, sidaa darteed ma aha oo kaliya dadka, laakiin sidoo kale dirxiga ee cayayaanka oo dhan ku quudiyaan iyaga farxad, sidaas darteed helitaanka boqoshaada oo dhan waa shaqo adag.
Caanaha madhicirta maaha mid kali ah, oo sidaas awgeed waxaa lagu dabooli karaa uun saaxiibada. Mushroom wuxuu inta badan ku nool yahay kaymaha geed, cawska hooseeya. Mushaharadu wuxuu leeyahay dabool yar oo ka badan noocyada kale ee saliidda, sidaas awgeed mararka qaarkood waxay u muuqataa inay gebi ahaan qalalan yihiin. Daboolka wareegga ah ee miisaanka xajmiga ayaa gaadhaya 10 cm.
Shaybaarka dhallinyaradu waxay leeyihiin furfuun ama midab bunni ah, taas oo ah, markay qaan-gaaraan, oler ayaa noqda jaalle ama jaalle-huruud. Dhaqanku wuxuu leeyahay tuubbo dhuuban oo gaaban oo ka sameysan lakab saarka iftiinka ama midab huruud ah.
Mushaharka wuxuu leeyahay dhumuc dhuuban, midab madow, oo aan wax ka beddelin midab. Geedka jaalaha ee fangasku wuxuu gaaraa dherer ilaa 8 cm, qaybta sare waxay leedahay midab cad oo daboolaya abuur iyo burooyin.
Dibedda, dufanka dufanku waa mid caano ah, oo la mid ah saxanka dufanka leh, mid dhab ah, farqiga ugu wayni waa maqnaanshaha giraanta filimka ah ee asliga ah. Boorashka cagaaran waa miro la cuni karo oo leh sifooyin dhadhan sare leh oo la cuno cusub, la qaado ama la cusbaado.
Saxanka dufanka Cedar
Qoryaha kedarka ah wuxuu leeyahay koofiyad dhexdhexaad ah oo ah 3 illaa 15 cm.Magaajinta dhalinyarada waxay ku faani kartaa qaabkeeda, laakiin da'da waxay toosisaa oo waxay noqotaa barkin-qaabeeya. Midabka daboolkiisu waa mid bunni ah, hawada roobeed ama qoyan waxay noqotaa mid xajinaysa, isla markaana dhakhso u qallajisaa oo u noqoto mid dhalaalaya.
Jidhka kedarka ah ee cadaanka ah waa caddaan ama huruud, wax yar oo dhadhan ah oo dhadhamiya oo ka bixiya ari ah oo macaan. Tuubooyinka iyo dhejiyayaashu waxay leeyihiin dufan qurux badan, midab jaalle ah ama midab liin leh.
Saliidda kedar ee saliidda leh waxay leedahay saldhig weyn oo dherer ah, dhererkiisuna wuxuu ka gaaraa 4 ilaa 12 cm, oo likaha waxaa laga heli karaa geedo geedo kedar ah, geedo geedo kedar ah, ama geedo waaweyn oo kedis ah. Waqtiga ururinta ee fungus waxay ku dhacdaa bilowga geedkii ubax.
Ma taqaanaa? Dhawaanahan, saynisyahannadu waxay ka heleen maadooyinka saliidda gaarka ah ee ka tirtira madax-xannuunada, iyo sidoo kale inay gacan ka geystaan ​​hurinta weerarka gout.
Saliida saliida ah waxay ku noolaan kartaa hareeraha. Masraxa Larch waxaa laga heli karaa kaymaha laga bilaabo Julaay ilaa Nofembar. Noocaan saliida ah wuxuu leeyahay waxqabad aad u fiican oo ku koraya kooxo badan. Boorashka hooseeya wuxuu leeyahay lemon-jaalle ama huruud ah-jaalaha ah-jaalaha ah, kaas oo aad u adag in uu diiriyo. Midabka qaybta isbeddelku wuxuu ku kala duwan yahay jaalle ilaa caleemo-jaalle, marka la riixo, dhibco casaan-bunni ah ayaa ku jira.
Lugta cylindrical ee fangaska ee qaybta sare waxaa lagu qurxiyey giraan, kaas oo ka sarreeya kaas oo uu leeyahay liin-jaalle ah, oo ka hooseeya wuxuu leeyahay midab jaalle ah oo bunni ah. Qulqulka canuga waa jaalaha ah, laakiin fasaxa waa midab bunni ah. Mushinka wuxuu leeyahay dhadhan khafiif ah iyo dhadhan wanaagsan.
Dufan saxaraha dhabta ah
Oler ayaa hadda ku kora carrada bacaadka ah. Xilliga kuleylku wuxuu bilaabmaa Maajo wuxuuna dhamaanayaa bisha Sebtembar. Maydka miro ayaa keli keli ah ama kooxo.
Waa muhiim! Dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in ay ka fogaadaan cunista qadar badan oo saliid ah dadka qaba cudurada mareenka caloosha. Xaqiiqdu waxay tahay in boqoshaada tiro badan ay ku jiraan cellulose, lagu qooyay quinine, taas oo kaliya ma xaddidan nuugista cuntada, laakiin waxay sidoo kale keeni kartaa caabuq habka dheefshiidka.
Saliida dhabta ah waxaa lagu qurxiyaa koofiyadaha 10-centimeter, oo ka bilaabmaysa shirarka ka dibna ku dhowaad isku dhejisan oo ku xiran boodh yar oo dhexda ka ah qaabka, oo leh shukulaato-bunni iyo mararka qaarkood oo leh hooskii jilicsan ee midabka. Fungus waxaa lagu daboolaa mucosa shiidan, diirka oo si fudud looga saari karo. Tuubbooyinka boqoshaada dhalinyarada ah waa cirro huruud ah, laakiin waqti ka dib way madoobaan waxayna noqdaan madow madow.
Noocyada fangaska waa cirro huruud ah, laakiin sida fungus bislaado, waxay noqdaan dhalaalaya huruud ah, iyo dambe brownish huruud ah. Lakabka tuubbada waxaa lagu dhejiyaa xariijinta cylindrical, isagoo gaaraya dherer 10 illaa 25 cm oo leh hunficiin-liin leh qaybta sare, iyo hooska hoose ee hoose. Sida fungus ku kora, buste filim caddaan ah, kaas oo marka hore ku xiraya darafka daboolka leh asliga ah, weli ku on foomka of a violet ama giraanta madow-brown.
Hadalka macdanta lulaaba waa mid aad u casiir leh oo jilicsan wuxuuna leeyahay sifooyinka dhadhanka sare, oo la mid ah saxaraha boqoshaada cad. Cuntada dhabta ah iyo caleenta caleenta ah ma aha kuwo isku mid ah, sidaa darteedna way ku dhowdahay in lagu qaldo.
Booti cajiib ah
Maskaxaha cajiibka ah wuxuu leeyahay koofiyado badan oo xajmi leh, oo gaadhaya dhexdhexaadinta 5 ilaa 15 cm, diirka daboolka si fudud ayaa loo saaraa. Mushinka wuxuu qaabeeyaa qaab gaaban, ugu badnaan 11 cm oo dherer ah oo lagu qurxiyo giraan ku dheggan gudaha. Mushaharaha la cuni karo oo dhadhan leh oo ku habboon qashinka, qalajinta iyo hoyga.
Suufiska subag leh
Saliidda rinjiga waxay leedahay dabool, kaas oo noqon kara 3 illaa 15 cm dhexroorka. Dhinaca daboolka, waxaad tixgelin kartaa jajabyada, kuwaas oo ah haraadiga bustaha gaarka ah. Daboolka fangasku wuxuu leeyahay qaabab casri ah ama barkimaad ballaaran. Midabkiisu wuxuu ku xiran yahay cimilada cimilada: qoyaan badani waa mid madow, oo iftiiminaya cimilada qalalan. Sidoo kale, daboolka fangaska ayaa is beddelaya marka uu ku dhaco cayayaanka. Dhalinyaro rinji ah oo dhejis ah, midab-cas, casaan-guduud ah ama koofiyado casaan-gaduud ah oo ku daboolan miisaan yar oo bunni ah ama bunni ah. Lugta jaalaha ah ee fangasku waxay gaari kartaa dherer ilaa 12 cm Aagga baaluqa waxaa la gooyaa tuubooyinka hoos u dhiga lugta isla markaana waxay sameeyaan mesh.
Saxarka huruuda ah ee fangasku wuxuu leeyahay cufnaanta sare iyo jabinta jebinta, laakiin waa mid aad ufiican dhadhanka. Saliidda rinjiga ah waxaa la cuni karaa xitaa iyadoon daaweynta kuleylka hore.
Xuubka Casriga ah waa mid aad u dhif ah oo la cuni karo oo laga heli karo oo keliya kaynta geedkii. Boqollaal dhalinyaradu waxay leeyihiin lebis midab-cas ama midab jaalle ah, kaas oo ugu dambeyntii furo oo u soo noqda meel ficil ah. Waxay leedahay baalal gorgortan. Tuubooyinka iyo godadka fangaska ayaa ah casaan-guduud oo ha baddalaan midabka marka uu waxyeelo soo gaadhay. Lugta cas ee qaab-kooxeed ama cylindrical ayaa hoos u dhigta xagga hoose waxaana lagu daboolaa ubaxyada guduudan.
Fungusku wuxuu leeyahay hurdi, hilib aan isbedelaynin midabka hawada mana uusan haysan dhadhan macaan iyo caraf udgoon.
Boorsada casaan-gaduudka ah waxay leedahay khudaar jilicsan oo jilicsan ama jilbis, oo ku daboolan qolfaha cas-cas. Diiqidda adoo raacaya tubbo jilicsan ama huruud ah-caleenta ah ayaa lagu daboolayaa daloolo ballaaran. Daboolka ayaa loo xajiyaa hoos ujeeda sare iyo sare, oo leh lugta jaalaha ah ee jaalaha ah. Qalabka jilicsan ee jaalaha ah ee fangaska ku yaala jabka ayaa casaanaya waxayna bixiyaan dhadhan roodhida leh.
Nabadgalyo casaan ayaa laga heli karaa Alps, Western Siberia, Altai, Western Siberia iyo Yurub.
Boorka casaanka waa muusiko yar oo ku kora kaymaha isku dhafan oo awood u leh inuu nuugo burooyinkeena dhadhanka leh dhadhan jilicsan oo jilicsan iyo caraf udgoon leh. Mushaharadu waxay hoos yimaadaan hoowlaha oo waxay sameeyaan masraxiyad leh iyaga. Waxaad ugaarsan kartaa kalluunka casaanka laga bilaabo Julaay ilaa Nofembar. Beeraleyda khibrad leh waxay sheeganayaan in aysan macquul ahayn in la arko daboolka casaan-guduudan ee saliidda cas ee cawska. Mushta uma dulqaadanayo cidlo, sidaas darteed, haddii aad ka heshay hal saliid subag leh, ka dibna waxaad si toos ah u ururin doontaa xidhmo yar.
Marka aad cunto karisid, maqaarka waxaa laga saaraa fungus, maadaama uu noqonayo midab madow ah inta lagu jiro daweynta kulaylka, iyo boosadihii diiri jiray waxay leeyihiin midab khafiif ah.
Saliida gaaska waxaa laga heli karaa da 'yarta yar yar iyo kaymaha geed. Mushinka wuxuu ku koraa kooxo waaweyn. Daboolka barkinta ee tuubada dhexe ee xariggu waa midab-cad oo leh cagaar ama midab yar oo casaan ah, daboolka dhalada ayaa gaari kara dhexroor illaa 10 cm, waxaana lagu daboolayaa lakab leh qoyan qoyan. Lakab-brownish-ama buni-caddaan ah daaha tube ee fangaska ka kooban tuubooyin ballaaran oo hoos ugu lugta.
Lugta yar ee boqoshaada waxaa ku wareegsan giraan balaadhan, oo wakhti u dhumaya. Daboolka waxaa lagu daboolayaa diir adag oo si sahal ah looga saari karo adigoo hoos u dhigaya fungus daqiiqado yar oo biyo ah.
Soodhada subagga Siberian
Daboolka maqaarka ee Siberian ah ayaa gaari kara dhexroorka laga bilaabo 4 ilaa 10 cm. Khariidadha boqoshaada dhalinyarada ah waxay leeyihiin qaab ballaaran oo qotodheer, qaabab beck-qaab ah iyo midab leh oo huruud ah ama huruud ah. Daboolka boqoshaada waxaa la sameeyaa fiilooyinka shucaaca ee madow. Midabka lugaha iyo saxarka fangaska waa jaale ama jaale hurdi. Dibedda, saxanka subagga Siberian wuxuu aad u la mid yahay caleenta saliidda cedar, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay midab khafiif ah marka loo eego ehelkeeda.
Waa muhiim! Biophysicists waxay ogaadeen in boletus badi boqoshaada kale ay u nugul yahiin radionuclides, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan inay noqoto mid aad u taxaddar leh meesha ay ku ururinayaan.
Shirkadda saliida waxay la hadli kartaa wakhti dheer. Laakiin waxa ugu muhiimsan - waa boqoshaada aad u dhadhan fiican leh, kuwaas oo labaduba fiicnaadaan qaab cusub oo la kala qaado. Saliidku waa mid caafimaad qaba oo nafaqo leh. Si kastaba ha noqotee, markaad qaadato boqoshaada, aad u taxadar oo ha iloobin inaadan u dirin nuqullo shaki leh dameerka, sababtoo ah waxay isticmaalaan waxay keeni karaan sumeyn daran.